Hlola iNaples, Italy - World Tourism Portal
Hlola iNaples, e-Italy
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eNaples, Italy
Okufanele ukwenze eNaples, e-Italy
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeNaples
Bukela ividiyo ekhuluma ngoNaples
Hlola uNaples ku Italy, inhloko-dolobha yesifunda saseCampania. Idolobha lingumasipala wesithathu onabantu abaningi e-Italy, kepha indawo yesibili yedolobha ikhayithi. Yasungulwa phakathi kwenkulungwane ye-7th ne-6th BC ngamaGreek futhi yaqanjwa ngokuthi iNeapolis, okuchaza ukuthi idolobha elisha. Isikhungo esingumlando saseNaples sithole ihlelo le-UNESCO World Heritage Site. Inesinye sezikhungo ezinkulu kakhulu zomlando emhlabeni, futhi ukuziqhenya kwayo ngamasonto angokomlando nama-448, inani eliphakeme kakhulu eMhlabeni ngomuzi owodwa.
Idolobha elinempilo elinokuningi ongakubona futhi ukwenze, idolobha elinomthelela omkhulu phakathi kwabavakashi Rome, Venice, UFlorence njll ... Akuzange kwenzeke futhi ngaleyo ndlela ngivumele idolobha ukuthi ligcine iningi lesiko langempela, ukuvumela ukuthi uvakashele igugu elifihlekile amahora nje we-2 eningizimu yeRoma. Isifunda saso, ikakhulukazi ukubuka kwesithombe kwe-Naples (kodwa neNtaba iVesuvius, umculo, njll.) Ngesinye sezithombe ezingokomfanekiso ezinamandla zase-Italy.
INaples yayisetshenziswa ihlukaniswe ngama-30 conttieri (omakhelwane), noma kunjalo namhlanje le mizi ayisebenzi kangako ekuphatheni kepha isasetshenziswa ngabendawo ukubhekisela ezingxenyeni ezithile zedolobha. Kulezi zinsuku idolobha lihlukaniswe ngomasipala base10.
ICentro Storico (Isikhungo Somlando)
I-labyrinth yomlando eyakhelwe ezingxenyeni eziningana zesikhathi esisodwa phezu kwenye nokuheha izivakashi eziphambili zaseNaples. Ngama-pizzerias amahle kakhulu, amasonto e-barouque, amanxiwa angaphansi komhlaba ama-greco-roman, imigwaqo edumile njenge-Spaccanapoli enezitolo ezithengisa izibalo zendabuko zokuzalwa ze-Neapolitan, mozzarella, izingubo zokugqoka nezikhumbuzo kanye nokuphila ebusuku okuhle nemvelo kwenza lo mnyuziyamu ophilayo wamahhala kumele ubone phakathi kokubonayo kweNaples.
Isikebhe sentaba-mlilo esaziwa futhi sathandwa amaRoma namaGreek ngezikhukhula zayo ezishisayo, manje esingesinye sezikhungo zobumnandi beNeapolitan ngesinye sezindawo ezinkulu zediski kanye nesinye sezikhungo ezinkulu zemidlalo eNaples. Okunye okutholakala ngaphakathi kwendawo kubhavu okushisayo, amanxiwa okugeza kwamaRoma, i-la Grotta del Cane eyi-mofetta kanye nekhaya ezintweni eziningi ezenzeka ngentaba-mlilo kanye ne-Astroni crater a WWF oasis.
Njengoba kunamabhodlo aseRoma omhlaba nangaphansi kwamanzi, umbono odumile weNaples, ukuhamba olwandle olunamanzi amnyama aluhlaza okwesibhakabhaka kuqhathaniswa namaza asolwandle amise okwezikebhe ezimhlophe, inqaba yaseNorman uCastel dell'Ovo, amakhebuli wasendulo, izigodlo nezingadi zenza lokhu kwaba ngeNaples 'izindawo ezinhle kakhulu.
Umakhelwane omnandi ugcwele izihlahla, amasonto amaningi nezinqaba kanye nezimbiza.
Umakhelwane omuhle odweba amathuna nesigodlo esikhulu kunazo zonke saseNaples, i-Ospedale L'Albergo Reale dei Poveri (iBourbon Hospice for the Poor).
IZona Industriale (Indawo Yezimboni)
Isigaba sebhizinisi kuleli dolobha, sigcwaliswe kakhulu ngabakwa-skyskrapers abenzelwe umakhi waseJapan uKenzo Tange. Iqoqo elikhulu kunawo wonke lama-skyskrapers eningizimu yeYurophu.
Ulimi olukhulunywa kakhulu eNaples isiNtaliyane noma ingxube yesiNtaliyane neNapulitano (Neapolitan). Amagama eSpanishi nawaseFrance aqondwa abantu bendawo. IsiNgisi yilona limi olukhulunywa kakhulu emazweni angaphandle, yize ulwazi olungejwayelekile lwesiNgisi lungekuhle kakhulu.
Idolobha laseNaples licatshangwa ukuthi lingenye yamadolobha amadala kunawo wonke emhlabeni, kepha umlando wawo ogciniwe waqala lapho abahlali abangamaGrikhi besungula amakoloni kule ndawo phakathi nenkulungwane yesibili BC Kamuva, elinye ikoloni, elibizwa ngokuthi i-Parthenope, lasungulwa amaGrikhi amaningi amakoloni avela esiqhingini sase-Aegean Rhodes phakathi nekhulu lesishiyagalolunye leminyaka u-BC Parthenope wagcina esenqabile, kepha-ke, kwasekuqaleni indawo yaseNaples (kanjalo) etholakala endaweni entsha yaseGrisi ebizwa ngeNeapolis phakathi nekhulu lesithupha BC
INeapolis yaba ebaluleke kakhulu embusweni weMedithera YamaGrikhi ebizwa ngokuthi iMagna Graecia (Okukhulu Greece) kanye nesikhungo esibalulekile sokuhweba.
Isimo sezulu saseNaples, e-Italy singena esigabeni se- “Mediterranean,” okusho ukuthi ubusika bakhona buncane futhi buyana imvula ngenkathi ihlobo laso lishisa futhi lomile. INaples ibuye ifanelwe njengesimo sezulu “esingaphansi kwendawo yonke” njengoba izinsuku zayo zasehlobo ezijwayelekile zibhalisa indlela ye-23º C.
INaples ihanjiswa yiNaples Airport, eyaziwa nangokuthi iCapodichino Airport.
INaples ixhumene ngqo neRoma ngumgwaqo omkhulu we-A1, futhi uhambo ngokuvamile lungaphansi kwamahora we-2.
Uzomangala ukuthi ungathola kalula kanjani ngezinyawo, futhi. Izindawo ezithakazayo cishe kuzo zonke izinkalo futhi amabanga amaningi - ikakhulukazi esikhungweni (somlando) - mncane futhi angahanjiswa kalula endabeni yemizuzu.
ENaples, abanye bangathola izimo zangempela zezakhiwo eziningi kanye nemigwaqo, kanye ne-graffiti evamile, esetshenziswayo. Abanye bathi lokhu "ngumlingiswa omkhulu nesiko likaNapoli ... futhi ukungcola nobumnandi kunokunambitheka kwalo siqu ... iresiphi ye-Neapolitan engokoqobo, futhi kumnandi kakhulu". Ukuphawuleka kukaNaples ukuthi isikhungo sedolobha akuyona ingxenye enhle yedolobha. Ungalindele nje enkabeni yedolobha izimo zamaprinta zamanye amadolobha amakhulu aseYurophu, ngoba isikhungo somlando, ngokungafani namadolobha amaningi aseYurophu, akuyona "idolobha eliphansi". Uma ufuna ukuvakashela ingxenye enhle yedolobha, ungahamba uzungeze i-lungomare emangalisayo (iRiviera di Chiaia noma iVia Francesco Caracciolo), futhi uvakashele iVia dei Mille neVomero hill (izindawo ezinkulu zokuthenga). Okufanele ukubone eNaples.
INaples inezinto eziningi ezikhangayo nemisebenzi elindele izivakashi zayo zonyaka. Ayikho indlela yokubabhala bonke lapha, kepha ngezansi ezinye zezinto ezaziwa kakhulu ukwenza eNaples:
Yima ngePiazza del Plebiscito, ehlala eduze kweGulf of Naples naphakathi kweRoyal Palace empumalanga neSonto laseSan Francesco di Paola entshonalanga. Amakholoni ayelula emaphethelweni ayo, futhi kunezakhiwo eziningi ezidumile ngaphakathi kwebanga elifushane lokuhamba. Ngesinye isikhathi, amakhonsathi omphakathi avulekile azoba ku-piazza.
Vakashela iLake Agnano, okungelona ichibi kodwa wake waba,. Leli chibi, elalihlala esigodini sentaba-mlilo ese-Agnano manje, selikhishwe e1870. Emngceleni oseningizimu we “ichibi, ”uzothola izindawo zokugeza zesibabule zemvelo nomhume obizwa ngokuthi yiGrotta del Cane eduze.
Relax e-Villa Comunale, ipaki esechibeni elakhiwe ezweni elibuyiselwe olwandle. Leli paki libuyela kuma-1780's futhi ekuqaleni laliyinsimu yasebukhosini yeNkosi uFerdinand I wama-Sicilies amabili. Ipaki ine-greenery eningi, ibala lokudlala, i-mini roller rink, ne-Anton Dohrn Aquarium, eyakhiwa kuma-1870's.
Elinye ipaki okufanele uphumule kulo yiVilla Floridiana eseVomero Quarter. Uzothola izihlahla eziningi nezingadi zezimbali kanye nendlu ene-neoclassical evela ku-1819. Le paki iqanjwe ngunkosikazi kaFerdinand I owayengowakwaDuchess waseFloridia. Ngezizathu, ungavakashela iDuke of Martina National Museum of Ceramics.
ICentro Sub Campi Flegrei yisikhungo sokudaya / sokuhlwitha esibekwe ogwini lweGulf of Naples. Kude kude ne-Phlegraean Islands engasogwini futhi ingaphakathi kwemingcele ye-Archaeological Park yaseBaiae, okuyisiza sezindawo ezitholwa ngaphansi komhlaba ezingamanzi ezaziwa ngokuthi ngaphansi komhlaba yasePompeii. Isikhungo sokumba sesivulekile unyaka wonke.
Iya kuMkhosi we-Open Air Cinema ngesikhathi ehlobo eViale del Poggio di Capodimonte. “Yisinema ngaphansi kwezinkanyezi” okwenzeka enkundleni yemidlalo ezungezwe ichibi lokufakelwa.
Thatha uhambo lwedolobha noma izindawo eziseduzane, kungaba ngezinyawo, nge-limo, nge-scooter yemoto, ngemoto yangasese noma ngebhayisekili. Kunemizila yedolobha eya esikhungweni esingumlando, i-panoric Vomero Quarter nakulo lonke idolobha. Kukhona izinkambo zosuku ezenzelwe eNaples eziya eVesuvius, Pompeii, amanxiwa aseHerculaneum kanye nasogwini oluhle lwe-Amalfi. Ungathatha futhi uhambo olungaphansi komhlaba lweCatacombs yeSan Gennaro, ukubona izinsalela zamathuna asendulo angamaKristu.
Vakashela iNaples nezindawo ezizungezile ngejubane lakho.
INaples idume ngezimakethe zayo zangaphandle nezitolo ezincane (idolobha linenombolo ephezulu kakhulu) futhi yilapho izivakashi eziningi zithanda ukuchitha isikhathi sazo esikhulu sezitolo. Kodwa-ke, inezinye izikhungo zezinothi ezithengisa okufana nokuthenga ezitolo ezinkulu kanye nabathengisi bewayini. Ungathola izinto ezibizayo, eziphezulu, ama-antique angavamile, okokugqoka okwenziwe ngezandla nangezikhumbuzo, futhi nganoma yini enye oyifunayo eNaples - futhi okuningi kwayo ngamanani aphansi kakhulu kunasemazweni aseNtshonalanga Yurophu.
IPizza ivela eNaples. Funa i-pizza margherita, eyokuqala, engenalutho ngaphezu kwamatamatisi amasha, i-basil, i-mozzarella entsha ne-oyili encane yamafutha. Ukudla i-pizza eFlorence noma ku Rome akufani nokuyidla eNaples! Lapha inhlama iba mkhulu futhi ihlafuna kancane.
ENaples yonke ipizzeria yenza ipizza enempilo. Ezinye izindawo zibonisa ilebula "Vera Pizza Napoletana" ["True Neapolitan Pizza"] nge-Pulcinella mask baking pizza in Vesuvio stylised, which shows that the pizzerria following the viwango ze-Associazione Verace Pizza Napoletana [True Neapolitan Pizza Association].
Ngokuvamile kulula ukuthola i-pizzeria enhle, vele ubheke eyodwa ngaphandle kwezivakashi!
I-cuisine ye-Neapolitan in izici ezijwayelekile zokudla kwasolwandle okuningi, okuhambelana nesimo sayo njengechweba lakudala futhi elisebenza namanje. Uzothola amasoseji amaningi asuselwa ku-ugarlic othunyelwe emafutheni omnqumo owengeziwe wentombi, utamatisi, newayini elibomvu lendawo. Amanye amasoso athandwa kakhulu yi-arrabbiata (“angry”) noma i-fra diavolo (“UMfoweth 'uDeveli”), okusho ukuthi izoqukatha upelepele oshisayo. Kuhle ukudla. Jabulela!
IMozzarella nayo iyinto ejwayelekile esifundeni, akufanele uphuthelwe ithuba lokunambitha entsha yangempela!
Idolobha nesifunda kudume nange-pasticceria (pastries) yabo, okubandakanya:
i-babà - itholakala cishe kuwo wonke amakhofi, ibha kanye ne-pasticceria edolobheni
i-jaka pastiera - ubumnandi obujwayelekile be-Ista (kodwa butholakala unyaka wonke), owenziwe ushizi we-ricotta oncibilikisiwe ngombila oshukela noshukela, bese ubhaka
i-sfogliatella - imvamisa igcwele ushizi we-ricotta (riccia) noma ukhilimu nge-flavour ye-citrus.
i-roccocò ne-struffoli - amaswidi kaKhisimusi ajwayelekile
Kuningi lapho kusetshenziselwa ikhofi kuzoba namakheli, ama-croissants agcwele ama-nati noma amanye amaswidi atholakalayo.
INaples iya ngokuya ithandwa ngesizukulwane esincane samaNtaliyane nabangaphandle. Yize kunemibiko yamanga nekhohlisayo yezimo ezingezinhle, bathuthela edolobheni futhi bavuselele amandla ayo okuphila kwasebusuku. Isimo se-hippest sizungeze imigoqo kanye namakhofi e-Piazza Bellini, Piazza Santa Maria la Nova nasePiazza San Domenico Maggiore, aba matasa ngemuva kwe-11PM. Kufanele uzame futhi indawo ezungeze iPiazza dei Martiri, Vico Belledonne a Chiaia, lapho ungathola khona imigoqo eminingi eminyene, ibha yewaviniga kanye nentsha eningi, ikakhulukazi ngezimpelasonto. Kodwa-ke, uma ufuna izikhungo zokuphuza zaseMelika / isiNgisi / iNyakatho yeYurophu ungacindezelwa kanzima ukuthola okudingayo njengoba lelo siko lifinyelwa eNaples. Kunezindawo ezinhlobonhlobo zokuphuza okuncane kepha uma ufuna ihholo likabhiya eligcwele, i-Irish pub, noma ibha yokujikisa isitayela saseMelika, uzoba nenkinga yokuthola eyodwa.
Uma useNaples futhi uzibuza ukuthi yiziphi iziphuzo zasendaweni ongazizama, impendulo yokuqala ukuthi iNaples idume ngekhofi yayo ebanzi ngokwengeziwe, e-semi-sweet njengoba injalo nepizza yayo.
Kulabo abangathanda ukuzama ubhiya wasendaweni newayini, kunezinketho eziningi. Amabha kabhiya ayeke angavamile, ubhiya ubudayiswa ngokwesiko futhi udliwe kuma-parlors e-pizza, kepha manje asevame kakhulu. Amabha wewayini asezingeni eliphezulu eNaples, akumangazi ngoba iyidolobha elikhulu laseCampania, okuyindawo enkulu ekhiqiza iwayini. Kunezinhlobo eziningi zewayini lendawo ongafisa ukuzilinganisa, kepha i-Aglianico ilungile ngokufanele. Amagilebhisi amnyama e-Aglianico atshalwa kuyo yonke iningizimu Italy, kodwa iCampania ibanikeza inhlabathi yabo ekahle nesimo sezulu esikhulayo.
Ezinye zezindawo eziphambili zaseNaples lapho imigoqo namakhekhe akhonza ubhiya newayini kuhlanganisiwe kufaka phakathi:
EPiazza Bellini, ePiazza San Domenico, nasePiazza Santa Maria La Nova
Emgwaqweni obizwa ngeVico Belledonne uyiChiaia, ikakhulukazi ngezimpelasonto
Emaphethelweni edolobha, eduze kwetheku kanye nomgwaqo obizwa ngePozzuoli
Ngaphandle kwamabha asePiazza Bellini, iSanta Maria la Nova, iPiazza San Domenico Maggiore, i-Via Carlo Poerio, iVico Belledonne a Chiaia kukhona namaqembu amaklabhu amakhulu asebusuku kanye namaqembu asolwandle ngaphandle kodwa okude nesikhungo somlando saseNaples.
Uma ufisa ukuzama okuthile ngaphandle kwaseNaples, ngempelasonto iPozzuoli igcwele imigoqo ezungeze ichweba elidala (ikakhulukazi, kepha hhayi kuphela emigwaqweni iLargo San Paolo kanye nemigwaqo ehambisanayo) kanye nesikwele esikhulu (i-Piazza della Repubblica), lapho uzothola khona amakhulu abantu abasha belenga phambi kwemigoqo bexoxa kakhulu nabangane babo kanye neziphuzo.
IBacoli neMiseno nazo zinezindawo ezinhle lapho abantu abasha bathanda ukuya khona. EMiseno kunemigoqo yokuphumula ebhishi, edumile phakathi nezimpelasonto zasehlobo.
ICaserta Royal Palace (Reggia di Caserta) Ngokucacile isigodlo sasebukhosini esihle kunazo zonke eYurophu, iRoyal Palace yaseCaserta iyisigodlo esikhulu sekhulu le-18th futhi indawo yokuzingela eyakhelwe uMakhosi waseBourbon waseNaples ngumakhi wezakhiwo wakamuva, uLuigi Vanvitelli. Isigodlo sizungezwe ipaki elihle kakhulu, elinamachibi, imifula, izigxobo, imithombo nemibono emangalisayo. Enyakatho nesiteshi sesitimela iCaserta, imizuzu engu-40 ngasenyakatho yeNaples. Vula unyaka wonke ngaphandle kwamaholide. Ukungena kokugcina e-15: 30 ezinyangeni zobusika.
Amanxiwa asePompeii. Bheka okumbiwe kweHerculaneum nePompeii eduzane naseningizimu yeNaples. yasePompeii imizuzu engu-40
I-Gulf of Naples